नजिक न्युज | छुवाछूतको धर्का मेट्दै कलाकार
छुवाछूतको धर्का मेट्दै कलाकार
काठमाडौं : परिवर्तनको संवाहक हो, गीतसंगीत। गीतसंगीतले समाजको यथार्थ चित्रण गर्छ। सूचना र शिक्षाको प्रभावकारी माध्यमका रूपमा पनि गीतसंगीतको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ। राजनीतिक परिवर्तनका बेला होस् या सामाजिक कुसंस्कारविरुद्ध, कलाकारहरू एकजुट हुन्छन्। रामेश श्रेष्ठ, जेबी टुहुरे, रायनले समाजमा चेतना छर्न गाउँदै हिँडेको परिवर्तन र मुक्तिका गीत हुन् वा जीवन शर्माले सर्वहारा वर्गको पक्षमा उठाएको बुलन्द सांगीतिक आवाज हुन् या रक्तिम परिवार, जनसांस्कृतिक मञ्चले गुन्गुनाएका विकृतिविरुद्धका झंकार हुन्— गीतले सदैव परिवर्तनको अपेक्षा गर्छ।
अघिल्लो महिना रुकुममा जातीय विभेदकै कारण ६ युवकको हत्या भयो। उपल्लो जातकी प्रेमिका लिन गएका नवराज विकलगायत उनका साथी गाउँलेको कुटपिटबाट मारिए । यो घटनापछि नेपाली कलाकारले पुनः एकपटक विकृतिविरुद्ध आवाज उठाएका छन्। कोहीले सामाजिक सञ्जालमा भिडियो पोस्ट गरे त कसैले स्टाटसमार्फत आफ्ना धारणा व्यक्त गरे। केही कलाकारले जातीय विभेदविरुद्ध गीत नै सार्वजनिक गरे।
गायक खेम सेन्चुरीले ‘कामी दाइको छोरो’ नामक गीत सार्वजनिक गरेका छन्। छुवाछूत जागरणका लागि गीत निर्माण गर्ने क्रममा रुकुम घटनाले आफूलाई निकै दिनसम्म आहत बनाएको जनाउँदै उनले समाजको यथार्थलाई गीतमार्फत प्रस्ट पारेको बताए। जातकै आधारमा मानव मानवबीचको भेदभाव अत्यन्तै नीच व्यवहार भएकाले यस्तो गलत परम्परा हटाउन आफूबाट नै सुरु गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ। कथित माथिल्लो जातकी युवतीलाई प्रेम गर्ने केटीले भगाएर लैजाऊ मलाई भन्दै अनुरोध गरेपछि गीतको भिडियो सुरु हुन्छ। गीतमार्फत खेम भन्छन्,
सानो सानो घर छ मेरो रुद्रपुरको गाउँमा
गोरेवावस भन्दै मलाई बोलाउँछन् गाउँमा
नामले पाको कामले पाको कामी दाइको छोरो
नलाम माया नखाऊ कसम मनै मेरो मोरो
ए साइँली मसँगै जान्छौ र मैले छोको खान्छेउ र ?
किन यति बुझ्ने भएर अबुझ बन्छेऊ ?
शान्ति श्री परियार र खेम सेन्चुरीको आवाजमा रहेको यो गीत अघिल्लो हप्ता अपलोड गरिएको हो। गीतमा जातीय विभेदका कारण प्रेमसम्बन्ध सफल नभएर आत्महत्या गर्न विवश जोडीको कथा फिचराइज गरिएको छ। अनिष दुवाडीको शब्द संगीतमा विनोद बाजुरालीले संगीत एरेन्ज गरेका छन्। संस्कृति म्युजिकले बजारमा ल्याएको यो गीतमा सिर्जना रश्मि मगर र खेम सेन्चुरीको अभिनय छ। जातकै कारण आफूले माया गर्ने एकअर्कालाई अपनाउन नसकेको जोडीले प्रेम गरेकै निहुँमा समाजमा भोग्नु परेको कहरलाई भिडियोले समेटेको छ।
यस्तै कलाकार तथा सञ्चारकर्मी चिरञ्जीवी सापकोटाले ‘जात’ बोलको गीत सार्वजनिक गरेका छन्। गीतका शब्दमा उनी भन्छन्,
किन मान्छे मान्छेको ठूलो भेद हुन्छ
रगत उस्तै मन उस्तै केमा फरक भेटिन्छ ?
उस्तै हो हृदय उस्तै हो भावना
उस्तै शक्ति सामथ्र्य पनि उस्तै नै हो चाहना।
तिमी र मबीच सबै चिज उस्तै हो। मन उस्तै छ। विचार, भावना, सामथ्र्य, हृदय सबै समान छ। हामीबीच विभेद उत्पन्न गर्ने जातमा के छ भन्दै दर्शक श्रोतालाई प्रश्न गरेका छन् उनले। सुमन स्मारिकाको आवाजमा रहेको मुक्तकलाई गीतको बीचबीचमा वाचन गरिएको छ। यसले गीतमा नौलो स्वाद दिएको छ। गीतमा प्रकाश दास, जीबी चिरन र प्रवीण भट्टको स्वर छ। ललित पौडेलको शब्दमा ओम सुनारको संगीत छ। गीतमा रवीन्द्र सुवेदी, अवि सुनार र गीता ढुंगानाको अभिनय छ।
गीतमार्फत समानताको पक्षमा आवाज उठाएका सापकोटाले समाजको कुसंस्कार हटाउन युवा नै जाग्नुपर्ने सन्देश दिएका छन्। विभेद गर्नेलाई कडा सजाय हुनुपर्ने माग गर्दै उनले छुवाछूत गलत सोच मात्रै भएको बताएका छन्।
यस्तै सन्तोष सुनारको शब्द, संगीत र स्वरमा रहेको ‘सानु मलाई धोका भो जातमा’ बोलको गीत पनि बजारमा आएको छ। रुकुम घटनामा मारिएका युवाको सम्झनामा गीत लेखेको सन्तोषले बताए। हेमन्त कान्छा रसाइलीको सारंगीको धुनसँगै सुरु भएको यो गीत निकै कर्णप्रिय छ। सारंगी र सन्तोषको जादुयी स्वरको सम्मि श्रण गरिएको यो गीतमा मर्मस्पर्शी शब्द समेटिएको छ। सुनार गीतमा भन्छन्,
छुट्ट्याउन दिएन मायाले तिम्रो मेरो जात
सबैभन्दा प्यारो थियो मलाई सधैं तिम्रो साथ
तिम्रो मेरो मायामा दैव दाइने परेछनतिमीबाट टाढा गर्न मलाई खोला तारेछनजिउन पाइन तिम्रो त्यो साथमा
सानु मलाई धोका भो जातमा।
तारा बनी झुल्किन्छु रातमा
सानु भो धोका भो जातमा।
समाजले इज्जत नै नदिएको, मानिस नै नगन्ने जातमा जन्मिएकाले नै तिम्रो हुन पाइनँ भन्ने गुनासो छ। माया त चोखो र पवित्र नै गरेको थिएँ तर जातले नै अछूत बनाइदियो भन्दै मन दुखाएका छन् उनले। यो जुनीमा सँगै हुन दिएनन्, अलग बनाउन खोलामा हेलिदिएर हत्या गरिदिए भन्ने भावको गीत लेखेका सुनारले ताराको संसारमा गएर तिम्रो साथमा आउँछु भन्दै वाचा गरेका छन्। समाजका कुसंस्कार हटाउन खोजेकै हो भन्दै उनले प्रेमका लागि आफूले जीवन नै त्याग्नु परेको नमीठो यथार्थ प्रस्तुत गरेका छन्।
बिहिबार ११, असार २०७७ ०९:१६ मा प्रकाशित
रोगभन्दा भोकको चिन्ता
उर्वशीको विवाहको फोटो भाइरल
दुई फिल्मबाट अनन्याको चर्चा
‘उनी र म’ फिल्म गित सार्वजनिक (भिडियो सहित)
चक्रबमले ल्याए नौलो प्रस्तुति ‘गाजल’ भिडियो सार्वजनिक
‘आयौं चेली माइती सम्झेर’ (भिडियो)